सिउँदोमा सिन्दूर लगाउनुको रहस्य यस्तो, किन लगाइन्छ सिन्दुर ? » Khulla Sanchar
सिउँदोमा सिन्दूर लगाउनुको रहस्य यस्तो, किन लगाइन्छ सिन्दुर ?
काठमाण्डौ- हाम्रा कति धर्मपरम्परा यस्ता छन्, जसलाई हामी जानेर वा नजानेर अनुसरण गरिरहेका छौं । पुर्खाले जे गरे त्यही गर्दै आइएको छ, अरू केही थाहा छैन भन्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यसैले हामीले यसका रहस्य बुझ्नु आवश्यक छ ।
वास्तवमा हामी संस्कार वा परम्परा यसकारण अँगाल्दै आएका छाैँ कि, हाम्रा पितापुर्खाले त्यही गरे । पितापुर्खाले गरेको काम हामीले पनि गर्नुपर्छ । तर, पितापुर्खाले किन त्यस्तो काम गरे ? हामी सोधीखोजी गर्दैनौं । आँखा चिम्लेर हामी पितापुर्खाले गरेको काम अनुसरण गर्छौँ। जब कि पिता पुर्खाले ती संस्कार अघि बढाउनुमा पनि विशेष अर्थ र कारण होलान् । त्यतातिर पनि सोधिखोजी गर्नु आवश्यक छ ।
सिउँदोमा सिन्दुर किन राखिन्छ ? जस्ता कुराहरूमा अन्धविश्वास मात्र नभई वैज्ञानिक रहस्य लुकेको छ भनेर दाबी गरिन्छ । के यो सत्य हो त र?
सिउँदोमा किन सिन्दूर लगाइन्छ ?
विवाहित हिन्दू महिलाहरूले सिउँदोमा किन सिन्दुर लगाउँछन् । यसलाई सौभाग्य एवं शुभमंगलदायक मानिन्छ । त्यसैगरी सिन्दूर लगाउँदा सौन्दर्यमा निखार पनि आउँछ । यो खासमा विवाहित भएको संकेत पनि हो ।
शरीर रचना विज्ञान अनुसार सौभाग्यवती नारीको सिउँदोमा जुन स्थानमा सिन्दूर सजाइन्छ, त्यो स्थान ब्रह्मरन्ध्र र अहिम नामक मर्मस्थलभन्दा ठीक माथि हुन्छ । स्त्रीको यो मर्मस्थल अत्यन्त कोमल हुन्छ । यसैको सुरक्षाको निम्ति पनि त्यहाँ सिन्दूर लगाइन्छ ।